wararka ganacsiga 2
Iyada oo horumarka laga sameeyay gudaha iyo dibedda, noocyada caanka ah ee tuubooyinka tuubooyinka ku shaqeeya ee suuqyada dibedda ayaa hadda la isku buuxiyaa, iyo isticmaalka tuubooyinka tuubbooyinka hose aad ayey u badan yihiin, gaar ahaan noocyada caanka ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la marayo horumarinta tikniyoolajiyada, gaar ahaan labadii sano ee la soo dhaafay, suuqa gudaha ayaa u dhowaaday kal-fadhi, taasoo horseed u noqotay tartan suuqeed adag. Qaar ka mid ah soosaarayaasha xitaa dagaallada qiimaha, waxay horseedaan fowdo suuqa oo dhan, taas oo aan u wanaagsanayn horumarka warshadaha oo dhan. Xaqiiqdii, way fududahay in la fahmo xaaladda jirta iyada oo la falanqeynayo xaaladda hadda taagan Sababta xaaladdan.
In kasta oo bilowga suuq-geynta qalabka guryaha uu xilli hore yahay, horumarka xilliyadii dambe ma sii socon karo. Marka la eego noocyada caanka ah, ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya alaabada caalamiga ah. Xitaa qiimaha waxsoosaarka ayaa aad u hooseeya, faa iidada qiimahana maahan. Waxaad macaashka samayn kartaa oo keliya marka loo eego tirada, marka la eego tikniyoolajiyadda horumarsan. Horumarka suuqa ee hadda jira badanaa waxaa sabab u ah horumarinta tikniyoolajiyadda muhiimka ah ee guriga, laakiin alaabooyinka aadka u sareeya ayaa had iyo jeer ahaa meel bannaan, oo aan ku filnayn inay buuxiyaan baahida suuqa.
Farqiga u dhexeeya suuqa caalamiga ah runtii waa mid aad u ballaaran. Dib-u-noqoshada geeddi-socodyada badan waxay horseed u yihiin horumarka horumarka teknolojiyadda, alaabooyinkuna ma buuxin karaan shuruudaha saxda ah ee mashiinnada hadda iyo injineernimada. Shirkadaha oo dhami mala fikiri karaan, waa inay dammaanad qaadaan tayada sare ee waxsoosaarkooda, oo waa inaysan si adag ugu tartamin inay carqaladeeyaan isbeddelada badeecadaha suuqa. Si loo horumariyo suuqa hadda, waxay u baahan yihiin inay xalliyaan dhibaatooyinka asaasiga ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda. Duruufaha jira, horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda ayaa ka dhigi kara shirkada inay noqoto mid aan lagaran karin horumarka degdega ah ee hadda. Ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo lagu badbaadin karo, kaliya dadka karti la’aanta ah ayaa ka laabta, "hal-abuurnimo" had iyo jeer waxay noqon doontaa himilada adag ee soo-saareyaasha tuubooyinkayaga!